Xanuunka Jwxo-shiil, oo ka Sii Daraya Galayna Xaalado Siyaasadeed – Rasaasa News
Mar 19, 2010 caafimaad, Eritrea, Ina Dhuubo, Jwxo-shiil
Ina Dhuubo oo ay Eritrea dhaafsan doonto Jwxo-shiil, Cudhaadhna u haysan doonto, marka Jwxo-shiil xaalad caafimaad lagu soo daayo, waana hadii uu Ogolaado dalaadlka ay wadaan Jwxo-shiilo.
Xukuumada Eritrea waxay u sheegtay Jwxo-shiil, si loogu qaado dalka Ingriiska oo uu dhalashadiisa haysto looguna soo daaweeyo, waa in uu Caasmara yimaado mid ka mid ah Kooxdiisa. Jwxo-shiil oo sidii aan hore idiinku sheegnay cudhaadh ay u haysatay xukuumada Eritrea ayeyna marna u suurto galin in uu dib ugu soo laabto gurigiisa oo ay ahayd in uu afar todobaad ka maqnaado.
Jwxo-shiil, oo ay xaaladiisa Caafimaad aad uga sii darayso ayaan rajo ka qabin in uu yimaado dalka Ingriiska si uu daawo u helo, inta uu ka imanayo Caasmara ruux ay Eritrea isaga ku badasho cudhaadha ay u haysato. Waxaana ka dayrinaya caafimaadkiisa takhaatiirta Eritreanka ah ku tacaalaya in ay dhimasho ka badbaadiyaan Mr. Jwxo-shiil.
Sida ay xaqiijinayaan warar naga soo gaadhaya qoyska Jwxo-shiil, waxaa ay Eritrea codsatay labo nin mid uun Cadaani [Ina dhuubo] ama Ina Ismaaciil [Mr qaaxo] in uu yimaado Casmara, ka hore inta aan Jwxo-shiil laga fasixin Eritrea. Qoyska reer Jwxo-shiil ayaa aad ugu cataabay Ina dhuubo, madaama uu Ina Ismaaciil diiday, waxayna u egg tahay in Ina dhuubo uu noqon doono ninka cudhaadha loo haysto marka Jwxo-shiil, uu ku soo baxo arimo caafimaad.
Inadhuubo, waa ogyahay xaalka uu Jwxo-shiil, ku joogay Eritrea, in badana way ka warwareegayeen tagida Caasmara, in isaga lagu doorsanayana wuu la socdaa. Ina dhuubo waxaa kale oo uu ogyahay in uusan lahayn tolfiican oo hareero istaagi oo dagaalka ay Eritrea kula jirto Itobiya u sii wadi doona si uu Ina Dhuubo u badbaado.
Kolka uu Jwxo-shiil, ka soo baxo Eritrea waxaa joogsan doonta xabadii ay beesha Jwxo-shiil, ku haysay shacabka iyo hayadaha aan dawliga ahayn ee ka shaqeeya dhulka Somalida Ogadeeniya, si Eritrea loo qanciyo.
Hadaba, saadaashu sida ay tahay; marka wal-walka ka muuqda Ina dhuubo iyo waxa aan ognahay kolka la isu geeyo, Ina dhuubo ayaa noqon doona ninka ugu dambeeya ee Ogadeen ee ku dhinta dalka Eritrea.